HWH ဥုံ For Android / Windows
"The Best Myanmar Offline News Reader"
HWH မှ ပြုလုပ်ခဲ့သော Appများ ရယူရန်
Download ဆွဲရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ
ဒီနေရာမှာကြော်ငြာနိုင်ပြီ ၁ရက်စာ 2000 ကျပ်>>> HWH ဥုံ ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း 09 79 4545 377
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အချိန်နဲ့တမျှ စီးဆင်းနေတဲ့ အကောင်းဆုံးသတင်း၊သုတ၊ရသများနဲ့ အတူ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှာ ရှိတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Usersများထံ နေ့စဉ်အရောက်ပို့ပေးနိုင်ပါပြီ။
ပေးပို့မည့်ပုံစံ>>> တနေ့ ၁ ကြိမ်
ဝန်ဆောင်ခ>>> ၂၀၀၀ ကျပ်(၁ရက်စာ) ၇ရက်အောက်ကြော်ငြာပါက တလ2ကြိမ်သာကြော်ငြာနိုင်
၁ လ အထူးနှုန်း - ၅၀၀၀၀ (ငါးသောင်း) ကျပ်သာ
ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းရမည့်ပုံစံ>>>KBZ ကမ္ဘောဇဘဏ် Bank Accountမှ တဆင့်
ကြော်ငြာလက်ခံမည့်ပုံစံ >>> ဓါတ်ပုံ ၁ပုံသာ + ၀န်ဆောင်မူပေးလိုသည့် ကြော်ငြာစာသား
အကန့်​အသတ်​မရှိ +လိပ်စာ အပြည့်အစုံ တို့ကို hwhforandroid@gmail.com (သို့) 09794545377 msgပို့ခြင့်ဖြင့် ပေးပို့ရန်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက HWH ဥုံ ကြော်ငြာကဏ္ဍ 09 794545 377သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး HWH ဥုံ အသုံးပြုသော အရေအတွက်မှာ ၁သိန်း၈သောင်းကျော် ရှိသည်။
လက်ရှိကြော်ငြာဆဲ ကြော်ငြာများမှာလည်း အောင်မြင်လျက်ရှိသည်။
HWH ဥုံ မှ ပြုလုပ်သော Appအားလုံးတွင် တပြိုင်နက် ကြော်ငြာပေးသည်။
HWH ဥုံ 5+ 6+
HWH ဥုံ v4.4 v3.3 v3.0.19 v2.2 v1.0
HWH ဥုံ Version အသစ် အဟောင်းများ Download ဆွဲရယူလိုပါက ဒီနေရာကိုနှိပ် ပါ။
နောက်ဆုံး Version မှာ HWH ဥုံ 6+ ဖြစ်သည်
HWH ဥုံ အသင်းအဖွဲ့များ ကဏ္ဍ
HWH “ဥုံ” v3.0.19 Usersများ ဖတ်ရန်
HWH ရဲ့ “ဥုံ” Version 2.2 (သို့) 3.3 သုံးသောUserများ ဖတ်ရန်
Myanmar Consumers Network (MCN) မြန်မာစားသုံးသူများကွန်ရက်
ဆည်းဆာရောင်ခြည် လူမှုကူညီရေးအသင်း (ရန်ကုန်)
"HWH ဥုံ ပေးစာ၊တိုင်စာ၊ရင်ဖွင့်စာ ကဏ္ဍ" သို့ ပေးပို့သော အကြောင်းအရာများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရူနိုင်ပါသည်
“ံHWH ဥုံ ပေးစာ၊တိုင်စာ၊ရင်ဖွင့်စာ ကဏ္ဍ” ဘယ်လောက်ထိရောက်လဲ: ဥပမာ
Android App Userများသို့ Adminမှအထူးအသိပေးချက်
သတင်းများ ဖတ်ပြီးတိုင်း Phone option>>Delete All (သတင်းကုန်သည်အထိ) လုပ်ပေးပါရန်။
နောက်ဆုံး Versionမှာ ဘာတွေထူးခြားလဲ
Mobile Data စနစ်မှာ များပြားလှတဲ့ သတင်း RSS Appတွေရှိပေမဲ့ ဆင်းရဲလှတဲ့ ကျတော်တို့နိုင်ငံအတွက် သမုဒ္ဒရာ ၀မ်းတစ်ထွာအနိုင်နိုင်အချိန် သတင်းအချက်အလက်ရယူဖို့ ငွေကြေးဆိုတာ အင်မတန်မှ စဉ်းစားစရာပါ။ ဒါကြောင့် ဆင်းရဲလှတဲ့ ကျတော်တို့
နိုင်ငံသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ခု ဇန်န၀ါရီလ ၄ရက်နေ့တည်းက ယနေ့တိုင် RSS သတင်း Appလောကမှာ
ရပ်တည်လာနိုင်တဲ့ ဥုံ ဟာ ခု အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုနဲ့ HWH ဥုံ Version 5+ကို ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့
HWH ဥုံ Version 5+ က User Editor Versionဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းဌာန Sourceတွေကို ဖြုတ်နိုင်/သွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းဌာန Source များအား ပယ်ဖျက်ခြင်း/ထည့်သွင်းခြင်း Manualလုပ် နိုင်မှု့ကြောင့် Mobile Data စနစ်သုံးစွဲသူများအဖို့ နှစ်သက်ရာ သတင်းSource ကိုရွေးချယ်နိုင်ကာ ငွေကြေးချွေတာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင်Downloadဆွဲရာတွင် ထပ်ဆင့် သတင်း/ရုပ်သံ/ဓါတ်ပုံများ ကြည့်ရှု့ရာတွင်လည်း မိမိဖုန်းရှိ နှစ်သက်ရာ Browserတစ်ခုခုကို ရွေးချယ်နိုင်သဖြင့် ပိုမိုမြန်ဆန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်း၏ အသွင်အပြင် အနေအထားကိုလည်း Userနှစ်သက်ရာ အရောင်ကာလာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာဘာသာဖြင့် လွယ်ကူနားလည်စွာ အသုံးချနိုင်အောင်လည်း ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ HWH ဥုံ 5+တွင် ပါရှိသော သတင်းSourceများမှာလည်း ဥုံ သက်တမ်းနှစ်ချီကြာ လေ့လာ၍ အကောင်းဆုံးများကို ဦးစားပေး ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
မိမိရွေးချယ်သည့် သတင်းဌာနအတွက်သာ Dataဖိုးကုန်ကျမည်ဖြစ်၍
"ကြိုက်သလောက် အမှန်ခြစ် ၊ အမှန်ခြစ်သလောက်သာ ကုန်ကျမည့်" HWH ဥုံ Version 5+ ကို ခုပဲ Download ဆွဲရယူပါ
စက္ကန့်ပမာဏ အချိန်လေးဖြင့် မှန်ကန်တိကျသော ခိုင်မာသည့် Mediaများ၏ ဝေေ၀ဆာဆာသတင်းအား
Mobile Data ဖိုး ကုန်ကျမှု့ အနည်းဆုံးနဲ့ သိရှိခံစားဖို့ HWH ဥုံ Version 5+ က တာဝန်ယူပါရစေ
ဒီနေရာမှာကြော်ငြာနိုင်ပြီ ၁ရက်စာ 2000 ကျပ်>>> HWH...
ဖုန်း​ဘေလ်​ Zeroနဲ့ သုံးလို့ရမယ့် "HWH4Telenor" apkအား Downloadဆွဲ ရယူနိုင်ပြီ
Telenor သုံး​နေပြီး ဖုန်း​ဘေလ်​ တပြားမှ မရှိဘဲနဲ့ ဖုန်း​ဘေလ်​ရှိ​သော်​လည်း အသုံးပြုခ တပြားမှ​ပေးစရာ မလိုဘဲနဲ့ Facebook ​ပေါ်က stat...
Mobile Data စနစ်ကြောင့် ပိုက်ဆံကုန်ကျမှု လုံးဝ(လုံးဝ) မစိုးရိမ်ရတော့မယ့် HWH ဥုံ 5+ Version သစ် Dwonloadဆွဲ ရယူနိုင်ပြီ 13.3.2015 01:00AM
Mobile Data စနစ်မှာ များပြားလှတဲ့ သတင်း RSS Appတွေရှိပေမဲ့ ဆင်းရဲလှတဲ့ ကျတော်တို့နိုင်ငံအတွက် သမုဒ္ဒရာ ၀မ်းတစ်ထွာအနိုင်နိုင်အချိန် သတင်း...
ဦးခေါင်းတော် လက်တော်စသည်များ ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွါးဆင်းတုတော်များအား ရှာဖွေပင့်ဆောင်လိုပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် ၀၉ ၂၀၆၁၀၅၆ ၀၉ ၇၉၁၄၀၇၅၀၀
ဘဂဝတာ ခေါ အာဝုသော ခဏ္ဍဖုလ္လပ္ပဋိသင်္ခရဏံ ဝဏ္ဏိတံ (ဝိ/ဋ္ဌ/၁/၉) "ဟောင်းနွမ်းဘုရား ပြုပြင် ငြားက ဘုရားချီးမွမ်း ကုသိုလ် လွှမ်း၏" အရှင...
HWH ဥုံ Usersများအတွက် စက်တင်ဘာလ အစီရင်ခံစာ By HWH ဥုံ Admin
မင်္ဂလာပါ HWH ဥုံ Users များခင်ဗျာ။ ယခုဆိုလျှင် ကျတော်တို့ App သက်တမ်းဟာ ၉လ ပြည့်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Windows Userများ သ...
တောင်သူလယ်သမားနေ့မှာ တောင်သူလယ်သမားများအတွက် Apk Download Here (apk) http://www.mediafire.com/download/ivhy9maovgobo27/mm_Farmer_1.41.78.173.apk
"mm Farmer " ယနေ့ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကျေးဇူးရှင်ကြီးများ ဖြစ်ကြသော တောင်သူ လယ်သမားကြီးများ၏ လယ်ယာမြေများကို သိမ်းဆည်းခံ...
ရွေးကောက်ပွဲသတင်းတွေ ဖုန်း​ဘေလ်​ Zeroနဲ့ သိရှိနိုင်မယ့် "HWH4Telenor" apkအား Downloadဆွဲ ရယူနိုင်ပြီ
Telenor သုံး​နေပြီး ဖုန်း​ဘေလ်​ တပြားမှ မရှိဘဲနဲ့ ဖုန်း​ဘေလ်​ရှိ​သော်​လည်း အသုံးပြုခ တပြားမှ​ပေးစရာ မလိုဘဲနဲ့ Facebook ​ပေါ်က s...
ဘာsim cardသုံးသုံး Appတစ်ခုတည်းသုံး "HWH4Operator" >MPT,Telenor,Ooredoo,MEC all in One App<.
ဘယ်​Operatorက လက်​ရှိမှာ ဖုန်း​ခေါ်ဆိုခ အသက်​သာဆုံး အင်​တာနက်​ခအသက်​သာဆုံး လွယ်​လွယ်​ကူကူ နှိုင်းယှဉ်​​ရွေးချယ်​လိုပါသလား? အ​ရေးကြီ...
HWH ဥုံ ရဲ့ Creation နဲ့ Telenor Myanmarရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုပေါင်းစပ်ပြီး "HWH4Telenor" Android App ရက်ပိုင်းအတွင်း အခမဲ့ထုတ်ဝေမည်။
Telenor သုံးနေပြီး ဖုန်းဘေလ် တပြားမှ မရှိဘဲနဲ့ ဖုန်းဘေလ်ရှိသော်လည်း အသုံးပြုခ တပြားမှပေးစရာ မလိုဘဲနဲ့ Facebook ပေါ်က statusတွေကြည့်ချင်လား? ...
HWH ဥုံ Version များရဲ့ ပြဿနာများကို ပြင်ဆင်ပြီး အင်တာနက် Data ၈၀-၉၀% ထိလျှော့ချ အကုန်အကျ အသက်သာဆုံးနဲ့ သုံးလို့ရမယ့် "HWH4SaveData" ဥုံ 6+ Version ထွက်ပြီ
သတင်း Appတော်တော်များများနဲ့ မတူဘဲ အင်တာနက် Data ၈၀-၉၀% ထိလျှော့ချ အကုန်အကျ အသက်သာဆုံးနဲ့ ခိုင်မာတဲ့ သတင်းမီဒီယာများရဲ့ နောက်ဆုံးရ ပြည်တွ...
မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း သတင်းအ၀င်နည်းပါးမှုပြဿနာ ကင်းဝေးရတော့မည့် HWH ဥုံ Version သစ် ဖြန့်ချီပေးပါတော့မည်
HWH ဥုံ တွင် Authorတစ်ယောက်အနေဖြင့် ပုံမှန်ရေးသားတင်ဆက်နိုင်ပါပြီ
HWH For Android Facebook Page
တွင် Authorအဖြစ် ခန့်အပ်ကာ
မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အချိန်/အရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်မရှိ ရေးသားတင်ဆက်ကာ
HWH ဥုံ Userများထံ
၁။ ကိုယ်ပိုင် Facebook အကောင့်တစ်ခုရှိရပါမည်။
၂။ HWH For Android Facebook Pageအား Likeလုပ်ထားရပါမည်။
၃။ ယခင် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော Facebook,Blog,Website များ ဖော်ပြရမည်။
၄။ မိမိ Post/Statusတွင် မိမိကလောင်အမည် မဖြစ်မနေဖော်ပြရမည်။
၅။HWH ဥုံ တွင် သုတ၊ရသ၊ကဗျာများ ရေးသားလိုသူများသည် စာပေပညာ အတွေ့အကြုံ ရှိရန်၊ ကလောင်စွမ်းရည် ထက်မြက်ရန် မလိုပါ။ ဤကဏ္ဍရှိ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်မျာကို လိုက်နာနိုင်လျှင် Authorဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၆။ မိမိ၏ သုတရသကဗျာများအား Online /Offline Mediaများမှ လွတ်လပ်စွာ ကူးယူဖော်ပြနိုင်ရမည်။
>>> အောက်ပါအချက်များနှင့် ငြိစွန်းလျှင် Authorအဖြစ်မှ ထာဝရ ရပ်ဆိုင်းခြင်း (သို့) ခေတ္တခဏ ရပ်ဆိုင်းခြင်း ပြုလုပ်ပါမည်။
၁။ သုတ၊ရသ၊ကဗျာ စသည်တို့နှင့် မသက်ဆိုင်သော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမူရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ သတင်းများ တင်ခွင့်မပြုပါ။(၎င်းအတွက် "HWH ဥုံ ပေးစာ၊တိုင်စာ၊ရင်ဖွင့်စာကဏ္ဍ" မှ ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
၂။ ကိုယ်ပိုင်ရေးသားခြင်း မဟုတ်ဘဲ အင်တာနက်ပေါ်မှ အစဉ်အမြဲ ကူးယူဖော်ပြခြင်း။
၃။ အကြိမ်ရေ များစွာ ပြန်တင်ခြင်း
၄။ ရိုင်းစိုင်းသော အသုံးအနှုန်း အရေးအသားများ သုံးခြင်း
၅။ မိမိ ကလောင်အမည် မဖော်ပြခြင်း
၆။ ၂ပတ်ကြာသည်အထိ ကွယ်ပျောက်နေခြင်း အသစ်မတတ်ခြင်း( ခြွင်းချက် Adminအား ကြိုတင် အကြောင်းကြားနိုင်သည်)
၇။ Usersများ Report တင်ခြင်းနှင့် Adminအား ထိခိုက်စေလိုသူ
>>> အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များအား ဖတ်ရှုနားလည်၍ Authorအဖြစ် ရေးသားလိုပါက hwhforandroid@gmail.comသို့
၅။ရေးသားတင်ဆက်မည့် ပုံစံ (ဥပမာ- ကဗျာများ၊ နေစဉ်လူမူဘ၀ပုံရိပ်များ၊ ဟာသများ၊ နှလုံးသားရေးရာ၊ ဟာသ စသဖြင့်)
ရေးသားပေးပို့ပြီး 09974545377 သို့ ဆက်သွယ် Confirmလုပ်ရပါမည်။ အခက်အခဲတစုံတရာရှိကလည်း အကူအညီတောင်းနိုင်ပါသည်။
HWH ဥုံ. Powered by Blogger.